Ny enim-bolana voalohan’ny Rising Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Aogositra 2018 3:03 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Desambra taona 2007 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Satria vonona hiditra ny taona 2008 isika rehetra, mankalaza ny enim-bolana voalohany nisiany kosa ny Rising Voices. Noho ny fanohanana mahafatra-po avy amin'ny Fikambanana John S. sy James L. Knight Foundation, dia afaka nizara famatsiam-bola kely ho an'ireo tetikasa fanentanana dimy momba ny fampielezam-baovaon'olom-pirenena tany Bangladesh, India, Sierra Leone, Bolivia, sy Kolombia ny Rising Voices. Samy nampiofana mpanao gazety olom-pirenena vaovao 100 mahery avy amin'ireo vondrom-piarahamonina izay mbola tsy niditra tamin'ny resaka antserasera manerantany ireo tetikasa dimy ireo.
Tsara ny mahafantra ny bilaogera vaovao tsirairay tsy toy ny loharanom-baovao fotsiny ihany avy amin'ny vaovao ivelany izay zara raha notaterina, fa koa amin'ny maha mpifanolobodirindrina sy namana azy ao anatin'ity tontolo mifintina haingana ity. Fantaro i Carmen, mpankafy tononkalo sy literatiora, avy ao amin'ny faritry ny sarangan'ny mpiasa ao La Loma ao Medellín, Colombia. Fantaro ny tantaran'i Suso- mpanangona entana azo havaozina eo an-toerana ao La Loma. Fantaro i Cristina Quisbert izay mibilaogy saika isan'andro avy ao amin'ny tanàna avo toerana indrindra manerantany, El Alto, Bolivia.
Na mankany Dhaka, any Bangladesh izay mampiofana zatovovavy toa an-dry Sifat Binte Qaiyum sy Ayesha Parveen mikasika ny fomba hanoratana ny tantaran'izy ireo sy ny vondrom-piarahamonin'izy ireo manokana anaty media aterineto ny Ivon-toerana Nari Jibon.
Any atsimo andrefan'i Bangladesh, dia mahita ny tetikasa Neighbourhood Diaries (Diarin'ny manodidina) atao ao Kolkata, India isika. Na dia mbola manomboka manoratra ao amin'ny blaogin'izy ireo manokana aza ireo mpandray anjara folo ao Bow Bazaar mpifanolo-bodirindrina, dia nampahafantatra antsika ny tsirairay amin'izy ireo ny mpitarika ny tetikasa Sahar Romani. Fantaro i Surojit Mitra 16 taona, ohatra:
Surojit dia mpianatra ao amin'ny Sekoly ambony Bow Bazaar. Mandritra ny fotoanany malalaka, tiany ny mandihy sy mihaino hira. Fantatra amin'ny fihomehezany sy ny dihiny amin'ny programa Sanlaap izy. Zavatra tsy fantatry ny olona momba azy ny tsy nahombiazany tamin'ny fanadinany.
Tamin'ny lahatsoratra iray taty aoriana, fantatsika fa ny Hotely Punjabi no mari-pamantarana ankafizin'i Surojit indrindra momba an'i Bow Bazza. Ity ny famariparitany azy:
Raha vantany vao tonga any amin'ny Hotel Punjabi ianao, ny zavatra henonao voalohany dia ny feon'ny resadresaka sy ny tabataban'ny olona miditra ao. Mitondra ny fofon'ny sakafo isan-karazany eo amin'ny oroko ny rivotra malefaka. Afaka mahita fivarotana kiraro ianao, ary efa lafo ireo legioma eny an-tsena. Ny fikasihana ny sakafo avy amin'ny hotely sy ny fuchka. Trano efa antitra izy io. Nalaza be tany aloha, fantatry ny rehetra izany. Ankoatra izany, naman'ny reniko ny tompon'ny toerana.
Farany, ataovy izay hankanesany any Think Build Change Salone ao Freetown, Sierra Leone. Taorian'ny ady an-trano mahatsiravina naharitra am-polo taona izay nahatonga an'i Sierra Leone ho firenena tsy dia mandroso indrindra manerantany, vondrona tanora vonona eo an-toerana- tahaka an'i Noah Dauda sy Daniella Wilson – no nanoratra ny ezak'izy ireo hanavao ny firenena. Ataovy izay hahitana ny sarin'i Noah Dauda momba ireo mpandraharaha ara-bola madinika sy ny traikefa niainan'i Emmanuel Joseph tamin'ny famokarana fanadihadiana tany amin'ny faritany atsinanan'i Kenema, Kailahun sy Kono.
Mijery any aloha
Araka ny hitanao, tao anatin'ny enim-bolana monja, dia nahavita fandrosoana mahagaga ny tetikasa tsirairay tamin'ny fampiofanana ireo vondrona bilaogera tany amin'ireo vondrom-piarahamonina zara raha fantatra. Nivoatra tao amin'ny vondrona tsirairay ny fahatsapana tanjona sy fiarahamonina.
Ao anatin'ny andro vitsy monja dia hanambara ny fihodinana farany amin'ireo mpandresy hahazo ny famatsiam-bola madinika izahay. Tetikasa dimy vaovao no hanatevin-daharana ny fiarahamonintsika mpanofana fanentanana sy ezaka ary asa soa napetrak'izy ireo. Amin'ny volana ho avy, hifantoka bebe kokoa amin'ny fandrisihana ny fifandraisana eo amin'ireo tetikasa 10 rehetra sy hanasongadina ny fitoviana amin'izany izahay.
Manantena izahay fa hanaraka izany ianao.